Isoka libaleka nomkhwekazi | Scrolla Izindaba
Isoka libaleka nomkhwekazi
“Kuwukukhaphela okukhulu,” kusho uJess Aldridge oneminyaka engama-24 ngemuva kokuba isoka lakhe libaleke nomama walo usuku ngemuva kokubeletha indodana yabo yokuqala.
UJess, odabuka e-UK, utshele i-The Sun ukuthi isoka lakhe lesikhathi eside, uRyan Shelton, oneminyaka engama-29, waqala ukuthandana nomama wakhe, uGeorgina, ngemuva nje kokuthi lezi zithandani zihlale naye.
Kubikwa ukuthi bahlala ndawonye ukuze uGeorgina, oneminyaka engama-44, nomyeni wakhe, u-Eric, bakwazi ukusiza lezi zithandani ezisencane unakekele usana.
Kodwa-ke, uGeorgina – esikhundleni sokubheka ingane yalezi zithandani esanda kuzalwa – waqala ukubheka elinye ilungu lomndeni.
UJess uthi ngesikhathi ebuya esibhedlela nendodana yakhe esanda kuzalwa, uRheuben, ngoMasingana, wethuka kakhulu lapho ethola ukuthi uGeorgina noRyan babendawonye.
“Kuwukukhaphela okukhulu. Ulindele ukuthi ugogo omusha athande nengane – hhayi ubaba,” kusho umama osemncane.
“Bekumele abe ugogo ezinganeni zami ezimbili futhi angisize ngizinakekele kodwa kunalokho uphume nesoka lami.”
UGeorgina wayekhona ngesikhathi kuzalwa umzukulu wakhe, kodwa wahamba waya ekhaya ngemuva kwalokho, uJess engakadedelwa esibhedlela.
Ngemuva kwamahora, uJess uthe uRyan wahlukana naye ngochungechunge lwemiyalezo.
Isizathu sakhe? Kubonakala sengathi wakhathele ngenxa yezinsolo zikaJess zokuthi wayethandana nomama wakhe.
Wayebonakala ukuthi iyamkhathaza kakhulu le ndaba “engalungile” kangangokuthi wabona indodana yakhe esanda kuzalwa imizuzu embalwa nje – ngenkathi eqoqa izinto zakhe eyohlala noGeorgina.
“Ngesikhathi ngibuya esibhedlela zonke izinto zabo bezingekho. Bengazi ukuthi uRyan uzoba nomama wami kepha akekho kubo owayezovuma.
“Ekugcineni, ngemuva kosuku uvumile ukuthi bayathandana.
“Umama ungitshele ukuthi ngeke akwazi ukukhetha umuntu amuthandayo noRyan wangitshela into efanayo.”
USally Land, Umhleli Wekhasi Lezeluleko kwi-The Sun, ubhalele uJess, “KUYINI kodwa ukukhaphelwa okubi kangaka okwenziwe ngabantu ababili okufanele ngabe bakuseka kakhulu.”
Umthombo wesithombe: @onlinenigeria